जाडो हुन्छ भनेर ताताेपानीले नुहाउने बानी छ ? कपाल धुँदा नगर्नुस् यस्ता गल्ती - माडी खबर
जाडो हुन्छ भनेर ताताेपानीले नुहाउने बानी छ ? कपाल धुँदा नगर्नुस् यस्ता गल्ती
माडी खबर calendar_today २० असोज २०७८, 11:33 pm
मी सबै आफ्नो कपाल सुन्दर, कमलो र चमकदार होस् भन्ने चाहन्छौं । कपाल धेरै नझरोस् र जस्तो स्टाइल पार्न पनि मिलोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हुन्छ । आजकलका विज्ञापनले पनि यो चाहनालाई लक्षित गरिरहेका हुन्छन् ।
तर सबैखाले सिफारिश र विज्ञापनले काम गर्छन् भन्ने छैन । अनि सोचेजस्तो नभएपछि मानिसहरू निराश हुन्छन् । त्यसैले यस्ता विज्ञापनका पछि लाग्नु भन्दा केही सामान्य गल्तीलाई नदोहो–याउने हो भने कपाल राम्रो हुन्छ ।
दिनभर काम गरेर थाकेपछि तातो शावरमा छिर्न मन त लाग्छ । त्यसमाथि अहिले चिसोको समय छ । तर यसरी तातो पानी टाउकोमा हाल्दा कपाल झर्छ । मनतातो पानीले नुहाएको ठीक । सम्भव भएसम्म चीसो पानीले कपाल नुहाउँदा त्यसले आराम पाउँछ ।
कन्डिस्नरको प्रयोगपछि धेरैजनाले त्यसलाई काम गर्न नदिइकन धोइहाल्छन् । तपाईं यो गल्ती नगर्नुस् । एउटा निश्चित समयसम्म कन्डिस्नरलाई टाउकोमा रहन दिनुस् । अनि कहिल्यैपनि चीसो कपालमा कन्डिस्नर नलगाउनुस् । सुक्खा कपालमा लगाएर केही समयपछि धुनु नै सही तरिका हो ।
रुमालले कपाल नसुकाउने
श्याम्पू राम्रो चीज होइन
स्वास्थ्य टिप्सबाट थप